३५ मिनेट पानी पर्दा वेहाल जनजीवन- भिडियो - कान्तिपुर समाचार
जेष्ठ २८, २०७६ जितेन्द्र साह
विराटनगर — मुलुककै दोस्रो प्रमुख महानगर विराटनगरमा सोमबार विहान मुश्किलले ३५ मिनेट जति पानी पर्दा जनजीवन वेहाल भयो । स्थानीयको दिनचर्या सँघर्षमय बन्यो । यो महानगरको सबैभन्दा मुख्य क्षेत्र हस्पिटल चोकदेखि शनिहाटसम्मको नाला एवं ढल भरिएर घरपसल, सडक, सहिद रंगशाला र कोसी अञ्चल अस्पतालकै मुख्यद्वारमा आवागमनमै हम्मे पर्ने गरी पानी जम्यो ।
महानगरको अन्य भेकको त के कुरा गरि भयो र? मुसलधारे वर्षा हुँदा वा दिनभरी पानी पर्दा यहाँ के हुन्छ होला भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
सबैतिर पूर्वाधार निर्माण नसकिंदा ढल र नाला भरिएर पानीले निकास नपाउनु एवं अवैज्ञानिक योजनाले सडकको उचाइँ घरपसलको सतहको समानान्तर वा त्योभन्दा बढी हुँदा वर्षामा यो महानगरमा जतात्यतै पानी जमेर स–साना अस्थायी पोखरीहरु बन्न पुग्छ।
आवागमनको मुख्य थलो मानिने कोसी अञ्चल अस्पतालको द्वार र सहिद रंगशालाको मुख्य प्रवेश ढोका जलमग्न भइ आवागमनमै कठिनाइ हुन्छ। खेलकुदको अभ्यास र व्यायाम गर्न रंगशाला पुगेकाले त पर्खाल नाँघन बाध्य हुनुपर्छ। अस्पताल आएका सेवाग्राही जसोतसो यताउतिबाट ओहोरदोहोर गरिरहेका हुन्छन्।
मुख्य सरकारी कार्यालय, अस्पताल र सँघसंस्था भएको हस्पिटल चोक वरिपरिकालाई अति आवश्यक कामकालागि बाहिर निस्कँदा र अरुतिरकालाई यहाँ आउनलाई पनि सोच्नै पर्छ। पत्रपत्रिका र औषधी किन्न एवं बिरामी भेट्न अस्पताल आएकाहरु पानी भरिएर नदेखिने खाल्डामा लडिरहेका हुन्छन्।
हल्का वर्षामा पनि ठाउँठाउँमा पानी भरिएर आवागमन अवरुद्ध हुनु महानगर विराटनगरको नयाँ समस्या होइन। तर आधाअधुरा निर्माणले समस्या झनै बल्झिएको छ। सबैतिर जारी पूर्वाधार विकासको काम सकिएपछि वर्षामा हिलामय र घाम लागेको बेला धुलामय हुने अवस्थाको अन्त्य हुने महानगरपालिका कार्यालयका पदाधिकारीहरुले भनिरहेकै छन्।
उहिलेदेखि रोकिएको कामले गति लिएकाले नागरिक समाज खुशी हुनुपर्ने र अर्को वर्षसम्म महानगरको स्वरुप फेरिइ सकिने उनीहरुको दाबी छ। तर सबैतिर मापदण्ड अनुरुप व्यवस्थित नाला तथा सडक नबनेकाले वर्षामा यि बाधाअड्चन आइराख्ने स्थानीय बताउँछन्। स्थानीयको अनुसार सडकको सतह र नालाको उचाइँ घरहरुभन्दा बढी हुँदा वर्षाको पानीले निकास पाइरहेको छैन। अर्कोतिर महानगरबासीको महत्वपूर्ण साझा सवाल ‘जनतालाई पीडा दिने गरी जेठ/असारमै विकास किन? अरु बेला गर्दा हुन्न र?’
प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७६ १८:३९
नेता नेपाललाई गाडीमा बसाउन दुई गुटबीच तानातान
सर्लाही — नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई जिल्लामा ल्याउन सिमरा विमानस्थल पुगेका स्थानीय दुई धारका नेताले आफ्ना गाडीमा चढाउन तानातान गरेका छन् । काठमाडौंबाट सर्लाहीको हरिपुरमा आयोजित ईद मिलन समारोहका लागि आएका नेता नेपाललाई स्वागत गर्न जिल्लाका दुई धारका नेता छुट्टाछुट्टै रुपमा सिमरा विमानस्थल पुगेका थिए ।
नेता नेपाल विमानस्थलबाट बाहिरिने बित्तिकै जिल्ला अध्यक्ष रेवती पन्तले स्वागत गर्दै आफ्ना गाडीमा आउन आग्रह गरेपछि नेपाल निकट मानिएका सुरेन्द्र लामा र प्रदेश सांसद बेची लुंगेलीले अर्कोतिर तानेका नेकपाको एक कार्यकर्ताले बताए । दुई पक्षबीचको तानातानले नेता नेपाल अलमलमा परेका थिए । लगतै विमानस्थलको एक कोठामा गएर नेपालले दुवैलाई सम्झाइबुझाई गरेपछि समस्या समाधान भएको थियो ।
नेता नेपाल जिल्ला आउँदा एक पक्षको गाडीमा चढ्ने तथा फर्किंदा अर्को पक्षको गाडीमा चढ्ने सहमति भएको कार्यकर्ताको दाबी छ । माधव नेपालनिकट जिल्ला नेता लामाले हरिपुर नगरपालिकाले गरेको कार्यक्रममा बोलाएकोले मंगलबार दिनभरी लामासँगै बस्ने र उनैले व्यवस्थापन गरेको गाडीमा चढ्ने सहमति भएको छ । यस्तै बुधबार सदरमुकाम मलंगवामा पार्टी कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम रहेकाले बुधबारको व्यवस्थापन जिल्ला अध्यक्ष पन्तले गर्ने सहमति भएको एक नेताले जनकारी दिए ।
नगरपालिकाले गरेको कार्यक्रममा नेतालाई आफूले बोलाएकाले आफूसँग आउनु पर्ने नेपालनिकट नेताको जिकिर थियो भने नेकपाका अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालनिकट मानिएका जिल्ला अध्यक्ष रेवती पन्तले जिल्लाको अध्यक्ष भएकोले आफ्नो गाडीमा जानुपर्ने माग अघि सारेका थिए । जिल्लाका दुई पक्षका नेताबीचको जुंगाको लडाइँ देखेर विमानस्थल पुगेका कार्यकर्ता निराश देखिन्थे ।
पार्टी एकिकरणपछि एकत्रित हुनु पर्ने ठाउँमा पहिलादेखि नै एउटै पार्टीमा अटाएका नेताबीच दूरी बढ्दो छ । पार्टीका जिल्ला तहकै नेता विभिन्न धारमा रुमल्लिँदा आमकार्यकर्ता भने निराश हुँदै गएको छ । पार्टी एकीकरण पछाडि एक ढिक्का हुनुपर्ने ठाउँमा पहिलादेखि नै एक ठाउँमा अटाएका पनि फरक फरक धारमा रुमल्लिएको आम कार्यकर्ताहरुको भनाइ छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७६ १८:३८